रोचक जानकारी – Page 21 – MeroJilla.com
किस गर्ने तरिका र त्यसको अर्थ ! Tuesday, July 1st, 2014
माया दर्शाउन सर्वाधिक प्रयोगमा आएको विधि हो किसिङ, जसलाई नेपालीमा ‘म्वाइ खाने’ भन्ने गरिन्छ । किसको स्पर्शबाट सायद कोही पनि वञ्चित नहोला । हरेकले जीवनमा कुनै न कुनै व्यक्तिबाट यसको स्पर्श पाएकै हुन्छ, चाहे बाल्य उमेर वा वयस्क हुँदा । यिनीहरुका विभिन्न विधि छन् । शैली र प्रसङ्ग अनुसार तिनका विभिन्न अर्थ पनि। फोरहेड किसः दुई व्यक्तिवीच आपसमा निधार र ओठको माध्यमले गरिने किस हो..
कस्ता तन्नेरी रुचाउँछन् युवतीहरु ? Wednesday, June 11th, 2014
/युवतीहरुको आँखामा पर्ने चाहना कुन युवकको हुँदैन र रु तर सबैलाई चाहेजस्तै अवसर कहाँ पो मिल्छ र रु युवतीहरुले आफुलाई मन पराइदिउन् भन्ने चाहना सबैको हुने भएपछि युवतीहरु खास गुण तथा क्षमता भएका युवकहरुलाई मात्र मन पराउँछन् । मनोविज्ञहरुका अनुसार पुरुषको बाह्य आकर्षणका साथै आन्तरिक क्षमता तथा स्वभाव महिलाहरुको छनोटको मुख्य दसी बन्दछ । आखिर केटाहरुमा हुनुपर्ने ती विशेष गुणहरु..
१५ वर्षीय किशोरको बच्चाको ४२ वर्षिया आमा ! Tuesday, June 10th, 2014
एजेन्सी/अस्ट्रेलियाको वूलमर हेमटन शहरमा असहज महसुस हुने एक घटना सार्वजनिक भएको छ । यहाँ एक ४२ वर्षीया महिला १५ वर्षीय स्कुले छात्रको बच्चाकी आमा बनेकी छिन् । विवाहित हेलेन कार्टराइट नामक महिलाले प्रहरी समक्ष आफुभन्दा २७ वर्ष कान्छो छात्रसँग केही महिनापहिला शारीरीक सम्बन्ध राखेको स्वीकारेकी छिन् । प्राप्त स्रोतका अनुसार महिला तथा त्यो किशोरको सम्बन्ध पहिला किसिङ तथा..
दिनभर अफिसमा बसेर पोर्न हेर्ने कर्मचारीको आवश्यकता ! Thursday, June 5th, 2014
(एजेन्सी)–यो समाचारको शिर्षक पढेर तपाईं पक्कै अचम्ममा पर्नुभयो होला र कतिजनाले त समाचार बिकाउनका लागि यस्तो शिर्षक राख्यो भनेर आरोप पनि लगाउन सक्नु हुन्छ । तर यो साँचो हो कि एउटा अफिसको लागि कर्मचारी चाहिएको छ जसको काम दिनभरी अफिसमा बसेर पोर्न फिल्महरु हेर्नु हो र उनलाई यहि कामको लागि नै तलब दिइन्छ । एक कम्पनीका लागि ‘चीफ पोर्नोग्राफी आइडेन्टिफिकेसन अफिसर’ पोष्टको लागि..
संभोग गर्न नमान्ने पुरुषलाई मुखमा पिशाव Wednesday, June 4th, 2014
पोर्ट मोरेस्बी। विश्वका विभिन्न देशहरुमा पारंपरिक एवं कानूनी तवरले महिलाहरुलाई केवल आफनो पति संगमात्र यौन सम्वन्ध स्थापित गर्न अनुमति दिईएको हुन्छ । तर विश्वमा यस्तो देशपनि छ जहाँ महिलाहरुलाई अनौठो किसिमको अनुमति दिईएको छ जुन सुन्दा अचम्म लाग्नु स्वाभाविकै हो । पापुआ न्यू गिनियाको ग्रामिण इलाकाका महिलाहरुलाई कुनैपनि पुरुषसंग यौन सम्वन्ध बनाउन छुट दिईएको छ । यति छुटले..
आफुले भनेजस्ती र रोजेजस्ती सुन्दर युवती पाउन ताजा रगत पिउनुपर्ने
आफुले भनेजस्ती र रोजेजस्ती राम्री सुन्दरी केटी नपाउदा कतिपय युवाले आत्महत्या गर्ने गरेका हुन्छन । संसारका धेरै देशमा गोरी, राम्री, सुन्दर आँखा, राम्रो नाक बान्की परेको अनि कमर छिनेको शरिर नै हेरेर माया गर्न चलन छ । तर, मन हेरेर माया गर्न युवाको संख्या भने कमै रहेको हुन्छ । तर, अप्रिकी देश युथोपियामा रहेका एक जनजाति समुहभित्र राम्री अनि सुन्दरी केटी पाउन पहिले गाईँको आलो रगत..
चरम यौनसन्तुष्टि लिने भए यसो गर्नुहोस् Monday, June 2nd, 2014
नियमित व्यायाम गर्ने महिलाले स्वस्थ शरीरसँगै बढी यौन सन्तुष्टि पाउने एक अध्ययनले देखाएको छ । नियमित जगिङ अथवा जिम गर्ने महिलामा यौन उत्तेजना चाँडै आउँछ । साथै, त्यस्ता महिलाले चरमोत्कर्ष चाँडै हासिल गर्ने अध्ययनले पत्ता लगाएको छ । अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको अटलान्टिक युनिभर्सिटीका प्राध्यापक टिना एम पेनहोको टोलीले गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । उत्तेजना..
होशियार ! रिसले हजुरको आयु घटाउँछ… Sunday, June 1st, 2014
कसैको साना साना कुरामा पनि झनक्क रिसाउने बानी हुन्छ । यदि तपाई धेरै रिसालु स्वभावको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा पर्ने देखएको छ । रिस भनेको मानिसमा सामान्य रूपमा हुने उद्वेग हो । यदि यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने यसले अरूलाई होइन, आफैंलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ। रिसाइहाल्नुअघि एकछिन सोच्ने बानी गर्नुपर्छ। यसो गरेको खण्डमा केटाकेटीलाई पिट्ने, घरेलु झगडा तथा..
गर्भवतीलाई इसाई धर्म मानेको भन्दै मृत्युदण्ड !
एजेन्सी/सुडानमा एक महिलाले क्रिस्टियन पुरुषसँग विवाह गरेको आरोपमा उनलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ । उनले इस्लाम धर्मलाई अस्वीकार गरेको आरोप लगाइएको छ । उनी आठ महिनाकी गर्भवती पनि छिन । २७ वर्षीया मरियम यह्या अब्राहिम यतिवेला अर्को धर्मको व्यक्तिसँग विवाह गरेबापत मृत्युदण्ड कुरेर बसेकी छिन् । उनले अमेरिकी नागरिक तथा इसाई धर्म मान्ने ड्यानियल बानीसँग बिहे गरेपछि उनलाई १ सय..
“पोखराकी एक युवती भन्छिन:एकैदिन ३१ जनासँग संम्भोग गरे Tuesday, May 27th, 2014
पोखरामा पछिल्लो समय वेश्यावृत्तिविरुद्ध प्रहरी खनिएको छ । वेश्यावृत्ति गरेरै जिवन धान्दै आएकाहरुका लागि प्रहरीले थालेको अभियान अभिसाप बनेको छ । प्रहरीले जतिसुकै धरपकड गरेपनि यो व्यवसायले निरन्तरता भने पाईरहेकै छ । धेरै कम रहर अनि बढि बाध्यतामा फँसेर नै युवतीहरु आफ्नो शरिर सम्म बेच्न होटल अनि रेस्टुन्टसम्म आईपुग्छन् । हामीले यहाँ एउटी त्यस्तै पेशेवर युवतीको कथालाई..
२३ औं जन्मदिनमा २३ जना परुषसंग एकैपटक सेक्स गर्ने उद्घोष ! Sunday, May 25th, 2014
एजेन्सी/मान्छेका इच्छा पनि कस्ता कस्ता हुन्छन । एक जना पोर्न स्टार हिदी वैन हाँनीले आफ्नो २३ औं जन्मदिनमा २३ जना परुषसंग सेक्स गर्ने बताएकी छिन् । चर्चित पोर्न स्टार हिदी वैन हाँनी २३ जना पुरूषसँग सेक्स गर्ने बताएकी हुन । उनको यो कुराले अहिले विश्वभरी चर्चा कमाएको छ । उनले अहिले सम्म ५ सय जना पुरूषसँग सेक्स गरिसकेको बताइएकी छिन् । एक्सएक्सएक्सएडिफोर प्रोडक्शनका अनुसार उनले..